Kubanjwe 'umkhonyovu wokuqashisa ngezidumbu' - Ilanga News
Home Izindaba Kubanjwe ‘umkhonyovu wokuqashisa ngezidumbu’
Kubanjwe ‘umkhonyovu wokuqashisa ngezidumbu’
Bekusizwa labo abafuna ukukhwabanisa imishwalense
USWELE umgodi wokucasha sezimkhalela owesifazane obezenza ilungu
lomndeni okusolwa ukuthi ubeqola umshwalensi ‘ngokuqasha isidumbu’.
KUVELE izinsolo zenkohlakalo ngoLwesine olwedlule, okuthiwa beyenziwa ngezinye zezisebenzi zamakhaza aseSiphingo, eThekwini, ILANGA eliligodlile igama lawo, okuthiwa “beziqashisa” ngezidumbu zabantu ngo-R3 000 kwabafuna ukukhokhelwa imali yemishwalense.
Lesi senzo sezinye zezisebenzi zala makhaza asetshenziswa ngabangcwabi abehlukene ukugcina izidumbu zamakilayenti abo sigcine siholele ekutheni kubhuntshe umngcwabo kaNdumiso Mbambo waseMlazi, obekuqashiswe ngesidumbu sakhe.
“Le nkohlakalo” ILANGA liyithole ngoMnu Muzi Hlengwa, ongumnikazi weBejay Funeral Services, esedolobheni eThekwini, okuyiyona ehlabe umkhosi.
“Ngingumngcwabi futhi nginamakhaza ami azimele, ngiyasebenzisana nabanye abangcwabi ngokubafakela izidumbu emakhazeni ami. NgoLwesibili ntambama sithole ucingo oluvela kulawo makhaza (esiligodlile igama lawo) esijwayele ukusebenzisana nawo, becela ukuba sibafakele isidumbu somuntu wabo emakhazeni ethu.
“Kuthe uma befika, izisebenzi zami zaqaphela ukuthi isidumbu ‘sijulukile’, obekukhomba ukuthi siphuma kwamanye amakhaza, kanti besitshelwe ukuthi silandwe ekhaya. Izisebenzi ziphinde zaqaphela ukuthi isithombe sikamazisi nesidumbu bekungafani.
“NgoLwesithathu kwafika owesifazane ongu… (emgagula), satshelwa ukuthi uyilungu lomndeni, uzogcwalisa amaphepha ukuze ezokwazi ukuyolanda isitifiketi sokufa. Isidumbu bebezosilanda ngoLwesine ngoba umngcwabo bekuthiwa uzoba ngoLwesihlanu,” kusho uMnu Hlengwa.
Uthi ithumba libhoboke ngoLwesihlanu emini ngesikhathi kufika umfana ozibize ngoMxo Bhengu ehamba ngezinyawo wathi usebenza emakhazeni (esiwagodlile), uxakekile, ucela usizo ufuna bamnike isidumbu sakwaMbambo.
“Kuthe sisamangazwe yilokho, nokuthi uzosifakaphi lesi sidumbu njengoba ubehamba ngezinyawo, wathi ucela ukukhuluma iqiniso ngobugebengu abenze nomnikazi wale nkampani.
“Usitshele ukuthi umqashisele isidumbu ngo-R3 000 umndeni kamufi ungazi, wathembisa ukuthi uzosibuyisa ngoLwesine emini ngoba abanikazi baso bebezosilanda ntambama ukuze singcwatshwe ngoLwesihlanu.
“Uthe umnikazi wale nkampani ubewashe lesi sidumbu ngoba efuna ukuthi udokotela ohlola izidumbu amgcwalisele amaphepha asemakhazeni ukuze ezokwazi ukuthola isitifiketi sokufa somunye umuntu, ukuze bezokwazi ukuyofuna imali yomshwalense.
“Uphinde waveza ukuthi wumkhuba wabo ukuqashisa ngezidumbu zabantu kulabo abafuna ukuyofuna imali yemishwalense. Usitshele nokuthi lona wesifazane ofike wazenza ilungu lomndeni, ubeqamba amanga, naye ubekhokhelwe ukuthi enze lokho.
“Simfonelile lona wesifazane obezibiza ngelungu lomndeni, sambizela emakhazeni ethu, samkhohlisa ngokuthi kunamaphepha okumele bawasayine. Kuthe uma efika, samphosa imibuzo wankwankwaza waze wacela ukukhuluma iqiniso.
“Sifonele amaphoyisa ukuba azobabopha. Sibe sesiqala phansi sazama ukuxhumana nabala makhaza ukuze sizothola umndeni wangempela walesi sidumbu,” kusho uMnu Hlengwa. Uthe le nto eyenziwa ngabantu yimbi, idicilela phansi isithunzi sabo bengabangcwabi abamnyama.“Imindeni isuke isinike izidumbu zayo ngoba isethemba. Siyafisa ukuthi abenzi bobubi bajeze ngale nto abayenzile, isidumbu somuntu siyahlonishwa,” kusho uMnu Hlengwa.
ILANGA likhulume noNkz Lethiwe Mbambo oyilungu lomndeni obekuqashiswe ngesidumbu sakubo, okuthe uma ebuzwa ngalezi zindaba, wacela ukuba abuye ashayelwe ngoba kukhona asematasa nakho. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukuthi kunesigameko esiphenywayo njengoba amaphoyisa esevule amacala amathathu, okungelokuntshontshwa kwesidumbu, elokuhlukumeza isidumbu nelokukhwabanisa. Uthe amaphoyisa amatasa nophenyo. nomfundo@ilanganews.co.za
Previous articleUmqeqeshi wePirates ubalisa ngamabhadi
Next articleBawethamele bengaphandle okamaskandi